‘चिसो मान्छे देखि कबड्डी ४’ को रिलिज होलान् त तोकिएकै मितिमा ? - Cherwant Khabar
‘चिसो मान्छे देखि कबड्डी ४’ को रिलिज होलान् त तोकिएकै मितिमा ?
प्रकाशित मिति: २०७८ जेष्ठ, ५ प्रकाशित मिति: २०७८ जेष्ठ, ५ by चेरवन्त खबर
Read Time:4 मिनेट,0सेकेन्ड
कोरोनाको पहिलो लहरले भन्दा दोश्रो लहरले पारेको असर निकै ठूलो छ । मानिसमा त्रास बढेको छ । यसैले, आम नेपालीले खोप नलगाएसम्म हलमा दर्शक फर्किने अवस्था छैन । दीपेन्द्र भन्छन्–‘अरु, क्षेत्र खुलेपनि हाम्रो क्षेत्र खुलिहाल्दैन । मनोरञ्जन क्षेत्र सबैभन्दा ढिलो खुल्ने क्षेत्र हो । यसैले, पनि चलचित्र क्षेत्र नै अब कसरी बढ्छ भन्न सकिदैन ।’
‘म यस्तो गीत गाउँछु २, लक्का जवान, निरफूल, चपली हाइट ३, प्रेमगीत ३, हिजो आजका कुरा, संझना विर्सना’ लगायतका चलचित्र यो सूचीमा पर्छन् । यस्तै, कोरोनाको दोश्रो लहरका कारण रिलिज हुन नपाएका ‘कृष्णलीला, मनसँग मन, लप्पन छप्पन २’ पनि अब कहिले रिलिज हुन्छन् यसै भन्न सकिदैन ।
दुई प्रान्तमा ४२ संक्रमित फेला परेपछि चीनमा १० दिनमा १० करोडले लगाए खोप
पर्सामा जेठ १३ गतेसम्म निषेधाज्ञा गर्ने निर्णय
सरकारी सहि छाप किर्ते गरी जग्गा नाउँमा गराउने चौधरी पक्राउ
आर्थिक विधेयक बहुमतले पारित
प्रकाशित मिति: २०७७ जेष्ठ, ३२ प्रकाशित मिति: २०७७ जेष्ठ, ३२
ढुवानीमा अवरोध नगर्न गृह मन्त्रालयको निर्देशन
प्रकाशित मिति: २०७८ जेष्ठ, २० प्रकाशित मिति: २०७८ जेष्ठ, २०
२०७६ चैत्र ४ गतेको राशिफल
बैशाख २७ गते सोमबार हेर्नुहोस आजको राशिफल
प्रकाशित मिति: २०७८ बैशाख, २७ प्रकाशित मिति: २०७८ बैशाख, २७
कोरोना संक्रमणबाट नेपालमा छैठौ व्याक्तीको मृत्यु
प्रकाशित मिति: २०७७ जेष्ठ, १६ प्रकाशित मिति: २०७७ जेष्ठ, १६